Mtb ဘဲလ်သံ Mtb ဘဲလ်သံ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. ၏ခြုံငုံဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာ & ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် Mtb ဘဲလ်သံသုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှု & ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, Marketing, အင်ဂျင်နီယာ, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောစီးပွားရေးပေါင်းစည်းသော။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ '' ဝယ်လိုအားအညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ပုံစံ - JH-308
ဆး.ဒဗလျူ.:8 KGS G.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ်
လှုံ့ဆော်နေသည်&တောက်ပသော Outlook–Fancy အပြည့်-သတ္တုအဖုံးဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/mtb-bell-ring.html
အကောင်းဆုံး Mtb ဘဲလ်သံ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Mtb ဘဲလ်သံ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Mtb ဘဲလ်သံ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ITEM:အသေးစားကြေးဝါဘဲလ်ပစ္စည်း:ကြေးဝါထိပ် anp ပလပ်စတစ်အခြေခံအရွယ်အစား:၃၀ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1PC/PE,20PCS/သတျတော200PCS/CTN.1.1cu.ft N.ဒဗလျူ:7 ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ:၉ ကီလိုအတွက်သင့်တော်သည်:22.2mm လက်ကိုင်ဘား အရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြေးဝါနှင့်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ပြတ်သားပြီးကျယ်လောင်သောအသံ:စက်ဘီးမြည်သံသည်ကျယ်လောင်သာယာစေသည်”Ding”အသံ,အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိလူများအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပြီးအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်,သင့်အားလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုယူဆောင်လာသည် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်. ကျယ်ပြန့် applications များ:universal စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လမ်းစက်ဘီးနှင့်လိုက်ဖက်သည်,တောင်တက်စက်ဘီး,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ကလေး’စက်ဘီး,ခရူဇာစက်ဘီး,MTB စက်ဘီး,BMX စက်ဘီး,လျှပ်စစ် Scooter,စသည်တို့.,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုလက်တွေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပါ
စက်ဘီးအတွက် Ring Bell
ITEM:MINI BRASS BELLSIZE:28 MMမူရင်း:ထိုင်ဝမ်မှာလုပ်ပါထုပ်ပိုးသည်:1 pc/အိတ်,20 PCs/box 200 PCs/ctnဆး.ဒဗလျူ.:8 KGS G.ဒဗလျူ.:10 KGS CUFT:၁.၁ ချိန်ညှိနိုင်သောစက်ဘီးခေါင်းလောင်း:ချိန်ညှိနိုင်သောသားရေကွင်းများ,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းချိန်ညှိရန်လွယ်ကူသည်;အချင်း ၂၂ မှစက်ဘီးလက်ကိုင်အများစုအတွက်သင့်တော်သည်-၃၅ မီလီမီတာ/၀ ယ်သည်.၈၇-၁.၃၈ လက်မ;၎င်းသည်ကွဲပြားသောစက်ဘီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည် အရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြေးဝါနှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ပြတ်သားပြီးကျယ်လောင်သောအသံ:စက်ဘီးမြည်သံသည်ကျယ်လောင်သာယာစေသည်”Ding”အသံ,အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိလူများအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပြီးအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်,သင့်အားလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုယူဆောင်လာသည် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်:တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်ကိရိယာများမလိုအပ်ပါ;၎င်းကို ၁ မိနစ်အတွင်းလက်ကိုင်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည် ကျယ်ပြန့် applications များ:universal စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လမ်းစက်ဘီးနှင့်လိုက်ဖက်သည်,တောင်တက်စက်ဘီး,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ကလေး’စက်ဘီး,ခရူဇာစက်ဘီး,MTB စက်ဘီး,BMX စက်ဘီး,လျှပ်စစ် Scooter,စသည်တို့.,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုလက်တွေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပါ
ITEM:ဂန္ထဝင်ကြေးခေါင်းလောင်းပစ္စည်း:ကြေးထိပ်,ကြေးဝါသံ rivet သံမဏိနှဲ့ Alloy အခြေစိုက်စခန်း၂၂ အတွက်သင့်တော်သည်.၂&၂၅.4SIZE:၄၀ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10PCS/သတျတော200PCS/CTN CUFT:1.6ဆး.ဒဗလျူ.:၁၃ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၅ ကီလိုဂရမ် ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်”Ding”လုံခြုံမှုရှိစေရန်အသံ:ကြေးခုံးနှင့်တူနှင့်အတူခေါင်းလောင်းကိုအနောက်ဘက်မှလူတွေကိုသတိပေးရန်ကျယ်လောင်ငြိမ့်ညောင်းသောဖုန်းမြည်သံကိုယူလာသည် သတ္တုကိုယ်ထည်:ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသောပွတ်တိုက်မျက်နှာပြင်သည်တောက်ပသောအသွင်ကိုဆောင်စေသည်.အကြမ်းခံနွေ ဦး နှင့်သံမဏိလှော်တက်များသည်စစ်မှန်သောအသံကိုကူညီပေးသည်.အလူမီနီယံအလွိုင်းကွင်းသည်ခိုင်ခံ့သောတပ်ဆင်မှုကိုသေချာစေသည် လက်ကိုင်အများစုနှင့်အဆင်ပြေစွာခေါ်ဆိုရန်လွယ်ကူသည်:သံတူသည်ခေါင်းလောင်းကိုအလွယ်တကူမြည်ရန်ကောင်းသောအနေအထားတွင်ရှိသည်.အရွယ်အစားနှစ်ခုပါသောရော့ကွင်းနှင့်အချင်း ၂၀ မီလီမီတာမှ ၂၅ ထိရှိသောလက်ကိုင်နှင့်အံကိုက်ဖြစ်သည်.၄ မီလီမီတာ(0.၇၉ လက်မ-၁ လက်မ)